आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ मा बुधबार नेपालले अमेरिकाविरुद्ध घातक बलिङ गरेको छ - Sindhu Online
Saturday 15th , May 2021 | शनिबार, जेष्ठ १, २०७८
आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ मा बुधबार नेपालले अमेरिकाविरुद्ध घातक बलिङ गरेको छ
काठमाडौँ । आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ मा बुधबार नेपालले अमेरिकाविरुद्ध घातक बलिङ गरेको छ ।
त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर पहिला फिल्डिङ रोजेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरको खेलमा अमेरिकालाई १२ ओभरमै ‘अलआउट’ गरेको हो । नेपाली बलरहरुका सामु निरीह बनेका अमेरिकी ब्याट्सम्यानहरुले जम्मा ३५ रनमात्र बनाउन सके ।
अमेरिकाका लागि जाभियर मार्शलले सर्वाधिक १६ रन बनाए । अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यान दोहोरो अंकमा रन बनाउन सफल भएनन् । अमेरिकाका चार ब्याट्सम्यानले रनको खातासमेत खोल्न सकेनन् ।
नेपाली बलर सन्दीप लामिछानेले ६ विकेट हात पारे । ६ ओभर बलिङ गरेका उनले १६ रनमात्र खर्चिए । यस्तै सुशन भारीले तीन ओभर बलिङ गर्दै पाँच रन दिएर चार विकेट लिए ।
विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत बुधबार (आज) नेपाल र अमेरिकाबीच अन्तिम प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । नेपाल घरेलु मैदानमा सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ ।
पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई ३५ रनले हराएको थियो । अमेरिकाले सिरिजमा कुनै जित निकाल्न सकेको छैन । ओमरले भने चारवटै खेल जितेको छ । नेपाल ओमनसँग दुवै खेलमा पराजित भएको थियो । नेपाल ओमनसँगको पहिलो खेलमा १८ रन र दोस्रो खेलमा आठ विकेटले पराजित भएको थियो । सिरिजको शीर्ष स्थानमा रहेको ओमनले १० खेलबाट १६ अंक छ । दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाको ११ खेलबाट १२ अंक छ । एक खेल जितेको नेपाल दुई अंक सहित छैटौं स्थानमा छ ।
सात राष्ट्र सहभागी लिग–२ मा नेपाल, अमेरिका र ओमनसहित स्कटल्यान्ड, युएई, नामिविया र पपुवा न्युनिगी छन् । अहिलेसम्म स्कटल्यान्ड नौ अंक सहित तेस्रो स्थानमा छ । नामिवियाको आठ र युएईको सात अंक छ । पपुवा न्युगिनी अंकविहिन छ । लिगमा हरेक टोलीले ३६ वटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने छन् । जसबाट शीर्ष तीनमा रहने टोली सन् २०२३ को विश्वकप क्रिकेटमा छनोट हुनेछन् ।
News Desk0response बुधबार, माघ २९, २०७६
विद्युत वितरण प्रणालीमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन
ठोरीको अयोध्यापुरीमा बढ्यो प्रम ओलीको चासो, आउँदो रामनवमीमा पूजा गरी काम सुरू गर्ने
विद्युत वितरण प्रणालीमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान..
ठोरीको अयोध्यापुरीमा बढ्यो प्रम ओलीको चासो, आउँदो..
अनियन्त्रित भई कार पल्टिँदा तीन जनाको मृत्यु
(तपोचुली मिडिया प्रा.लि द्धारा प्रकाशित)
सूचना विभाग दर्ता नं.: ९६० /०७५-७६
प्रकाशक : सबिना दाहाल सम्पादक : राजाराम खतिवडा
Copyright © 2021 Sindhu Online. All rights reserved